Waa dhowr iyo toban jir inta mar ee la guursaday tiro malahan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa dhowr iyo toban jir inta mar ee la guursaday tiro malahan
Gabadhan dhowr iyo toban jirka ah inta jeer ee la guursaday tiro ma laha. Rusul waxay soo kacday iyadoo kaligeed ah. Seygeedii cusbaa wuu baxay. Guurkeedana wuxuu ku ekaa saddex saacadood oo kaliya.
Kaasi ma ahayn arooskii ugu horreeyay ee ay gashay gabadhan dhowr iyo toban jirka ah. Ma ahayn keedii labaad, saddexaad ama xitaa afaraad. Run ahaantii inta jeer ee la guursaday maba tirin karto siday u badnaayeen awgeed. Nolosha xanuunka badan ee Rusul waxay kasoo billaabatay nin ugu tagay goob ay ka shaqeyneysay.
Arrintan oo dhan intii aysan billaabanin waxay arki jirtay gabdho sideeda oo kale u da’ yar oo maalin kasta iyagoo dharka arooska xiran uu gacanta ka qabsanayo nin hanti heysa oo aad uga weyn. “Waxay ahaayeen gabdho qurux badan, anigu ma fahmi jirin sababta ay gabar walba isu iibineyso,” ayey tirri.
Iyada lafteeda sidaasoo kale inay ku dhacdo ayey halis ugu jirtay – qoyskeeda way kasoo fogeyd, waxayna caawineysay walaasheed oo lagu magacaabo Rula. Laakiin iyadoo nolosha sidaas u adag ku jirta xitaa, waxay ballan uga qaadday nafteeda inaysan waligeed isu dhiibi doonin nin nolosheeda gacanta ku qabta. Mar kasta oo ay rag damcaan inay bartaan ama telefoon lambarkooda siiyaan, way iska indho tiri jirtay.
Noloshii ayaa kusii adkaatay Rusul. Iyadoo ku nool Magaalada caasimadda ah ee Baqdaad kuma uusan filneyn mushaarkeeda. Inkastoo ay horay wacad ugu martay inay wax walba ka madax bannaanaan doonto, haddana waxay billowday inay ka fikirto sidii ay xaas u noqon lahayd – oo ay u heli lahayd nin daryeela iyada iyo walaasheedba.
Ninkii sidii ayuu ugu tagi jiray goobta shaqada, maalin kastana wuxuu sameyn jiray waxyaabo uu kusoo jiito. Rusul si tartiib tartiib ah ayey ugu qaadday dareen jacayl. Dhowr isbuuc uun kaddib, wuxuu usoo bandhigay guur. Wuxuu u kaxeeyay xaafadda Kadhimiya ee ku taalla magaalada Baqdaad. Markii ay kusii socdeen goobta la isku mehersado, Rusul waxay dareemeysay farxad aad u ballaadhan.
Munaasabadda meherka lafteeda way iska gaabneyd – wadaadkii ayaa dhowr eray akhriyay, iyada ayuu weydiiyay inay aqbashay meherka oo qiimihiisu ahaa $250 kaddibna wuxuu siiyay warqaddii qandaraaska meherka. Rusul ma aysan akhrin karin waxa ku qoran warqaddaas, xitaa haddii ay eegi lahayd ma aysan fahmi lahayn inay wax khaldan ku jiraan iyo inkale. Daqiiqado yar kaddib markii uu waddaadkii u duceeyay, seygeeda cusub ayaa u kaxeystay guri meeshaas u dhawaa oo loo sheegay inuu yahay halka ay dageyso.
Walow Rusul ay xoogaa cabsaneysay, haddana waxay ku faraxsaneyd inay aragto guriga hoyga u noqonaya iyada iyo walaasheed. Qolkii jiifka ayey la gashay seygeeda, markii ay albaabka soo xireysay waxay afka ku heysay duco ay Alle uga baryeysay in ninkan uu si fiican ula dhaqmo, noloshoodana ay muddo dheer socoto.
Run ahaantiina, dhowrkii maalmood ee ugu horreeyay si fiican ayey wax u socdeen. “Waxaan dareemay inuu culeys weyn iga dhacay. In ugu dambeyntii aan wax kasta aniga la iga sugeynin,” ayey tirri. Laakiin dhowr isbuuc kaliya markii arooskeeda laga soo wareegay, seygeedii waa la waayay meel uu jaan iyo cidhib dhigay.
Waxba kama aysan ogeyn Rusul in guurkooda uuba ku ekaa waqti cayiman, oo la asteeyay intii uusan billaabaninba ka hor. Wuxuu ahaa nooc gaar ah oo ka mid ah guurka shiicada ee la isku khilaafsan yahay – oo la yidhaahdo “Zawaaj al-mutca” ama “Guurka raaxada”. Waa guur ay wadaaddada qaarkood ku banneeyaan in si xalaal ah la isugu galmoodo.
Guurkeediina sidaas ayuu waqtigiisa ku dhammaaday. Waxay go’aansatay inay ku laabato wadaadkii mehriyay. Waxay sheegtay inuu u muuqday qof sugayay iyada. Guurka mutcada waxaa lagu sheegay mid la sameyn jiray Islaamka ka hor, oo ay ku dhaqmi jireen dadkii carabta ahaa iyo kuwii Iiraan dagganaa labadaba.
Hadda waxaa mamnuucay culumada Shiicada ee Ciraaq iyo waddanka dariska la ah ee Iiraan, oo ah dalalka ay ku nool yihiin shiicada ugu badan.
Khubaro ayaa sheegay in Muslimiinta Shiicada ah ay kasoo horjeedaan guurka noocaas ah oo ay ku tilmaameen mid ujeeddadiisu tahay galmo oo kaliya, qarniyo ka horna lagu sameyn jiray goobaha cibaadada loogu safro iyo ganacsiyada meelaha fog fog loo aado, markaasoo rag kaligood socda ay u baahnaan jireen haween wehliya.
Guurkan waxaa lagu qeexaa qandaraas lagu muujiyo waqtiga uu ku egyahay, kaasoo la siiyo xaaska ku meel gaarka ah. Xittaa meelaha qaarkood hadda qandaraas lama qoro, wadaaddada unbaa afka ka sheega marka ay isku mehrinayaan lammaanaha. Waqtiga uu ku ekaan karo waa inta u dhaxeysa hal saac ilaa 99 sano. Ninka khasab kuma aha inuu maalin kasta xaaskiisa la joogo, markii uu doonana wuu baabi’in karaa heshiiskaas.
Guurka mutcada xaaraan ayuu ka yahay dhanka muslimiinta sunniyiinta ah.
“Arrintan waa mid aad loo sameeyo. Waxaa jira gabdho badan oo anigoo kale ah,” ayey tirri Rusul. Rulul iyo gabdhaha kale ee la midka ah, waxaa loo geystaa tacaddi. Ma aha dad uu aqoonsan yahay sharciga Ciraaq.
Xeerka u yaalla waddanka wuxuu dhigayaa in qof walba oo sameeya galmo ka baxsan guurka caadiga ah uu wajihi doono ciqaab dambiyeed oo gaareysa ilaa 7 sano oo xabsi ah.
Rusul waxay sheegtay in wadaadkii ku khiyaanay ninkii ugu horreeyay uu usoo jeediyay inay iska sii wadato arrintaas, rag kale oo badanna uu sidaas oo kale ugu guuriyo, isagoo ku dooday inaysan heysanin waddo kale oo u furan iyada.
Ma aysan dooneynin inay sii faahfaahiso inta ay dhan tahay lacagta ay ku qaadato arrintaas, laakiin waxay sheegtay in wadaadka uu lacag ka qaato qofka macmuulka ah, iyadana uu meherka siiyo.
Rusul waxay ogeyd inay dhibaato badan nolosha kala kulmeyso haddii ay mushaarka yar sii qaadato, maadaama aysan waxba baraninna aysan heli karin shaqooyin heer sare ah. Waxaa kale oo ay ogeyd inay weysay bikranimadeedii, sidaas awgeedna ay ku adkaaneyso sidii ay ku heli lahayd guur waara.
“Wadaadka wuxuu noqday nin i siiya shaqo, anigana ma heysanin wax aan ka ahayn inaan waddadaas ku socdo,” ayey tirri. Ma aysan dooneynin inay sii faahfaahiso inta ay dhan tahay lacagta ay ku qaadato arrintaas, laakiin waxay sheegtay in wadaadka uu lacag ka qaato qofka macmuulka ah, iyadana uu meherka siiyo.
Waxay BBC-da u sheegtay inay soo martay guur saacado ah iyo mid isbuucyo qaatay intaba. “Markii uu wadaadka isoo waco, oo uu igu dhaho, ‘Waxaan kuu helay qof kugu habboon,’ kuma dhihi karo maya.”
Rusul waxay ilaa hadda la seexatay tobannaan nin – xitaa ma garaneyso tirada saxda ah – ee lagu aqal geystay guurka mutcada. Waxay sheegtay in wadaadka uu si joogto ah u siiyo irbad ka ilaalisa inay uur qaaddo.
Tags: Waa dhowr iyo toban jir inta mar ee la guursaday tiro malahan
Next post Faransiiska: Wuxuu ardaydiisa tusiyey sawir laga sameeyey Nabi Muxamed NNKH asigana waa la gowracay
Previous post Maxay yihiin ciidamada Danab?